Video: Ma rumeysaneysaa in heerkan uu garay ammaanKa MUQDISHO? - Caasimada Online
Home Xul Video: Ma rumeysaneysaa in heerkan uu garay ammaanKa MUQDISHO?
Video: Ma rumeysaneysaa in heerkan uu garay ammaanKa MUQDISHO?
Amaanka Muqdisho in uu so laaabtay arin cadeyn u ah ayaan idiin wada maanta waa mid ka mid ah Meelaha ugu badan oo Shacabka ay isugu yimaadaan iyo waxa ka socda oo caqligaada diidayo amaanka siduu maanta yahay.
Boqolaal Shacab ah oo ku nool 16 degmo ee Muqdisho ka kooban tahay ayaa maalin walba isugu yimaado Goob caan ka ah Muqdisho waagii bariisamaadkiina la isugu imaan jiray oo dib u soo noqotay ee nala daawo muuqaalkaan.